कन्सुएलियो लोपेज-जुरिआगा। नदाल पुरस्कार फाइनलिस्टसँग अन्तर्वार्ता | वर्तमान साहित्य
कन्सुएलियो लोपेज-जुरिआगा। नडाल पुरस्कार फाइनलिस्टको साथ अन्तर्वार्ता
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | साक्षात्कार, लेखकहरू, नोभेला
फोटोग्राफी: कन्सुएलियो लापेज-ज़ुरियागा। फेसबुक प्रोफाइल।
कन्सुएलियो लोपेज-जुरिआगा fue अन्तिम नडाल पुरस्कार को फाइनलिस्ट उपन्यास संग हुन सक्छ पतनमाजुन उनले अप्रिलको अन्तमा प्रकाशित गरे। यसमा साक्षात्कार उनले हामीलाई उनको र प्रकाश विश्वमा भर्खरको आगमनको बारेमा बताउँदछन्। म तपाईंको दयालुता र समयको म साँच्चिकै कदर गर्छु
कन्सुएलियो लोपेज-जुरिआगा। अन्तर्वार्ता
साहित्य वर्तमान: हुन सक्छ पतनमा यो तपाईंको पहिलो उपन्यास हो र अन्तिम नडाल पुरस्कार को लागी एक फाइनलिस्ट छ। तपाईं हामीलाई यसको बारेमा के बताउनुहुन्छ र विचार कहाँबाट आयो?
कन्जुएलो लापेज-जुरिआगा: हुनसक्छ शरद ऋतुमा को बारेमा कुरा गर्नुहोस् हाम्रो जीवनको सामान्य सामान्यताको कमजोरता। कसरी दैनिक जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ, एक पल मा, जब मृत्युदर को सम्पर्क मा आउँछ। कथाले त्यस क्षणलाई समात्न प्रयास गर्दछ जब सामान्य अस्तित्व रहन्छ।
कथानक को रूप मा, यो कसरी जीवन को बताउँछ क्लाउडिया फिगरुइरो, मानव अधिकारको रक्षा गर्न समर्पित एक शानदार वकील, जब एक आमूल मोड लिन्छ Maurice, तपाइँको साथी, तपाइँ एक बाट निदान उन्नत क्यान्सर। त्यो क्षणदेखि, नायकले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दछ जुन त्यसबेलासम्म उसको जीवन र उनको महत्वाकांक्षालाई असर गर्ने थियो। रोगको विनाश र मृत्युको गलतफहमीको सामना गर्न नक्सा वा कम्पास बिना, उनीले एउटा बाटो शुरू गर्ने छ जसमा उनले आफूले माया गर्ने मान्छेको मृत्युको डर, उनको विगतको जीवनसँग बिच्छेद र यो अनुभूतिको बीचमा बहस गर्ने छिन। उनी यो कहिल्यै फेरी हुनेछैन।
छोटो, हुन सक्छ पतनमा वर्णन गर्दछ रूपान्तरण प्रोसेस जसको अन्तिम गन्तव्य भनेको हामी सधैं रह्यौं जुन रोकिने डरलाई हटाउन हो।
उपन्यासको विचार छ जीवनी र अन्य साहित्यिक मूल। पहिलो को रूप मा, यो क्यान्सर र मेरो साथीको निदान हाम्रो जीवन मा पनी प्रभाव संग मेरो आफ्नै अनुभवबाट आउँछ। दोस्रो सन्दर्भमा, यस उपन्यासको कथानक र यसको कथावाट आवाजको शब्दहरूबाट उदय भयो जोन डिडियन, कहिले en जादुई सोचको वर्ष, उनले भने: «तपाईं बेलुकीको खानामा बस्नुहुन्छ र तपाईंले जानेको जीवनको अन्त्य भयो »। डिडियन पढ्दा मलाई उपन्यासको स्वर दिइयो। उनी एक शक्तिशाली क्षमताको लेखक हुन् तथ्यहरुलाई बयान गर्नुहोस् ठूलो नाटकीय आफ्नो जीवन को लगभग शल्य चिकित्सा सटीक संग, शिकार र कुनै पनि भावनात्मकताबाट टाढा। म क्लाउडियाको कथात्मक आवाजलाई त्यो रेजिस्टरमा राख्न चाहन्थें, जहाँ भावनाहरू भत्किएन वा अत्यधिक हुँदैन, तर यो जोडले पाठकसम्म पुग्छ।
AL: तपाईले पढ्नु भएको पहिलो किताब याद छ? र पहिलो कथा तपाईंले लेख्नुभयो?
सीएलजेड: मलाई पढ्ने सम्झने पहिलो पुस्तकहरू ती हुन् एनिड ब्लिटन। Magi सँधै केहि प्रतिलिपिको साथ लोड भएको थियो पाँच, सात रहस्य वा त्यो बोर्डि school्ग स्कूलबाट - पूर्व हेरी पॉटर तर पनि धेरै बेलायती - जुन थियो मालोरी टावर्स. को टिंकल्स, कपडाको मेरुदण्डको साथ, मेरो भाइको संग्रह र आडभेचरबाट एस्टरिक्स र ओबेलिक्स तिनीहरूले मलाई चकलेटको साथ धेरै स्नैक्स रोटी पनि दिए।
म एक अन्तर्मुखी केटी र एक पाठक थियो र हुनसक्छ यस कारणले, लेख चाँडै पी को रूपमा अंकित भयोसानो कथा र कथाहरू। कथाहरू जुन उनले नोटबुकमा भण्डार गर्दै थिए, चित्रण र कोलाजसँगै, बाँकी रहेको जीवनको अवशेषहरू जस्तै।
लाई: मुख्य लेखक? तपाईं एक भन्दा बढि चयन गर्न सक्नुहुनेछ र सबै युगहरूबाट।
सीएलजेड: यसलाई केवल एकमा कम गर्न असम्भव छ, त्यहाँ धेरै लेखकहरू छन् जसले मलाई प्रेरणा दिएका छन् र जससँग मैले पत्ता लगाएको छु कि "सत्यको लागि महान अभियान" जुन पढिरहेको छ। मलाई १ th औं शताब्दीका उपन्यासकारहरू र उनीहरूको रूपमा वर्णन गर्ने स्मारकीय क्षमता मनपर्छ फ्लाउबर्ट, स्टेन्डल, टोलस्टय, डोस्टोभास्की, डिकन्स, गाल्डेस वा क्लारन। तर म संवेदनशील दृश्यको बारेमा पनि उत्साहित छु जुन अमेरिकीहरूले वास्तविकतामा खसाले, हेमिंगवे, डोस्पसोस, स्कट फिटजेरल्ड, चेभर वा रिचर्ड याट्स.
न त म ती बिर्सन्छु लेखक जो अनुभव उपन्यास संग र, एकै समयमा, मेरो आफ्नै कथा परियोजना को रूप मा प्रश्न फल्कनर, कोर्टिजर, काफ्का वा जुआन रल्फो। र अधिक पछिल्लो समयमा, म कथा कथित बौद्धिक को आश्चर्य मा प्रतिपादन गरिएको छ लुसिया बर्लिन र स्क्वाल्लरको बिट्सलाई राम्रा कथाहरूमा रूपान्तरण गर्ने उसको क्षमता।
AL: पुस्तकमा कुन पात्र तपाईंलाई भेट्न र सिर्जना गर्न मनपर्दछ?
सीएलजेड: ग्रेगरी समसाको नायक मेटामोर्फोसिसउहाँ मलाई एक असाधारण चरित्र जस्तो देखिनुहुन्छ जसले धेरै तहहरू प्रस्तुत गर्दछ र जसले अरू कुनै एक्लोपन र विश्वव्यापी पीडाको रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दैन, साथसाथै अर्कोको लागि अपहेलना, बिभिन्न, अपरिचित।
साथै Emma bovary यो एक स्मारक सिर्जना हो कि रोमान्टिक प्रेम र भावनात्मक विषाक्तता को विनाश मा संकेत, एक निर्विवाद आर्कटाइप बन्न।
AL: कुनै विशेष बानी वा बानी यो लेखन वा पढ्न आउँछ जब?
सीएलजेड: मसँग केही विधीहरू छन्। म आफैंलाई शर्त राख्न मन पराउँदिन। मलाई केवल s चाहिन्छIlencio, एक कफी र एक स्पष्ट तालिका। लेख्नका लागि मैले आफैं सुन्नु पर्छ, चरित्रहरू सुन्नु र दृश्यहरू कल्पना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि कथा ल्यापटप स्क्रिनमा उठ्न थाल्छ।
AL: र यो गर्न तपाईंको मनपर्ने स्थान र समय?
सीएलजेड: म चुपचाप लेख्छु। मैले आफूलाई अलग गर्नु पर्छ यसैले लेख्नको लागि, किनभने म देशमा बसिरहेको छु, मैले उत्तम ठाउँ पाएको छु। ज Mad्गलको लागि म्याड्रिडका सडकहरू परिवर्तन गर्दा मेरो ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता बढेको छ। साथै, जब मँँ अड्किन्छु म बिचहरू बोक्छु र झाडीमा बढ्न जान्छु। जे होस्, मलाई लाग्दैन कि तपाईंले "आफ्नै कोठा" कोशिस गर्नु पर्नेछ, औपनिवेशिक डेस्क वा समुद्रको दृश्यको साथ अध्ययन। जब कथा तपाईको भित्र रहन्छ, जोडतोडका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, रोके बिना र तपाई जहाँ भए पनि फरक पर्दैन। म बिहान सब भन्दा राम्रो लेख्छु जब दिनको आवाज मेरो टाउको मा प्रवेश गरेको छैन र ईतिहास कुनै अवरोध बिना सवारी।
मलाई एन्टांटा ओछ्यानमा पल्टिएको पढ्नुहोस् वा ओछ्यानमा यो गर्नुहोस्यद्यपि मैले बसमा, मेट्रोमा, रेलहरूमा र विमानहरूमा, पर्खाइ कोठामा र जहाँसुकै पनि पढेको थिएँ, जब कथाले मलाई समात्छ र म पुस्तकको प्रत्येक पृष्ठलाई अन्तसम्म नपुगुञ्जेल खाँदछु। म मेरो झोलामा बोक्ने हजारौ चीजहरूको बीचमा त्यहाँ प्रायः एक पुस्तक हुन्छ।
लाई: के तपाईलाई मन पराउने अन्य विधाहरु छन्?
सीएलजेड: मैले पढें परीक्षण, कला को इतिहास र मलाई मन पर्छ ऐतिहासिक उपन्यास। पूर्ण रूपमा साहित्यिक क्षेत्रबाहिर, मलाई बोटनी र कूकबुकहरू मन पर्छ।
लाई: तिमी अहिले के पढ्दै छौ? र लेख्दै?
सीएलजेड: हालसालै मैले अद्भुत त्रयी पढेको छु राहेल कुस्क, ब्याकलाईट, ट्रान्जिट y प्रतिष्ठा. मैले कसरी असाधारण पाएँ कथानकको अभाव, कारण-प्रभाव तर्कको, हामीलाई शून्यमा पुर्‍याउन धेरै टाढा, हामीलाई टुक्राको मोजेकमा लैजान्छ जसले सबै चीज ओगटेको छ र उपन्यास नै गठन गर्दछ। म पनि पुनः पढ्दैaमिगुएल डेलीब्स प्लेसहोल्डर छवि, एक महान लेखक जो कहिल्यै निराश हुँदैन।
लेख्न को लागी, म को चरण मा छु मेरो अर्को उपन्यास योजना गर्दै। रहस्यको शक्ति को बारे मा एक कहानी: ती रिडिमिडन उत्पादन गर्नेहरू र ती तीनिहरू जुन यसलाई प्रकट गर्नु राम्रो होइन।
लाई: तपाइँ कसरी सोच्नुहुन्छ कि प्रकाशन दृश्य कस्तो छ र तपाइँले प्रकाशन गर्ने प्रयास गर्न के निर्णय गर्नुभयो?
सीएलजेड: म भर्खरको प्रकाशन विश्वमा उत्रेको छु, त्यसैले म यसको वर्तमान स्थितिमा विस्तृत विश्लेषण गर्न हिम्मत गर्ने छैन। मेरा प्रथम प्रभावहरू अन्योलमा छन्। म पाण्डुलिपिहरूको एक विशाल आपूर्ति संग, एक संतृप्त बजार देखें, परम्परागत प्रकाशकहरू मार्फत च्यानल असम्भव; र अर्को तर्फ, म यो पनि महसुस गर्दछु परिवर्तनमा प्रणाली, जहाँ धेरै चाखलाग्दो प्रकाशन विकल्पहरू र ढाँचाहरू उठ्छन्, र जहाँ forms मनोरन्जन of का अन्य प्रकारहरूसँग प्रतिस्पर्धा कडा हुन्छ। छोटकरीमा, त्यहाँ एक छ पतन र नवीनता बीचको तनाव.
मेरो प्रकाशनको लागि आफूलाई सुरूवात गर्ने निर्णय यससँग सम्बन्धित छ दृढ विश्वास त्यो उसलाई पुस्तक पूरा हुन्छ जब पाठक अन्तिम पृष्ठमा पुग्छ। मलाई लाग्छ कि साहित्यको जादू लेखक र पाठकको बीचमा त्यो दौरमा छ। उपन्यास, उम्बर्टो इको पहिले नै भनिएको छ, «यो एक व्याख्या मशीन is।
लाई: के संकटको क्षण जुन हामीले अनुभव गरिरहेका छौं तपाईंको लागि गाह्रो भइरहेको छ वा भविष्यका कथाहरूको लागि केहि सकारात्मक राख्न सक्षम हुनुहुनेछ?
सीएलजेड: गत वर्ष धेरै व्यक्तिहरूको लागि धेरै गाह्रो र दु: खी भएको थियो, तर सायद सकारात्मक पक्ष महामारीले देखाएको तथ्य हो हाम्रो जीवनको आवश्यक कमजोरता र अस्तित्वगत अहंकार को मूर्खता। हामी सायद बढी सचेत छौं। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो पढ्ने बृद्धि। धेरै मानिसहरूले भाग्न, सान्त्वना, सिक्नको लागि आफ्नो पृष्ठमा हेर्ने पुस्तकहरू लिएका छन् ... संक्षेपमा, साहित्यको जादू।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » कन्सुएलियो लोपेज-जुरिआगा। नडाल पुरस्कार फाइनलिस्टको साथ अन्तर्वार्ता
एक नर्कमा अनन्तता